War-murtiyeedKa Ka soo Baxay Shirka Madasha Hoggaanka Qaran Ee Muqdisho Oo Dhameystiran – Goobjoog News
War-murtiyeedKa Ka soo Baxay Shirka Madasha Hoggaanka Qaran Ee Muqdisho Oo Dhameystiran
Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shirka madasha hoggaanka qaran ee Muqdisho, Kulanka madasha hoggaanka oo socday 6-14-ka bisha ayaa laga soo saaray war murtiyeed, qodobada shirka halkan ka akhriso.
War Murtiyeedka Shirka:
Madaxweynaha ayaa soo dhaweeyay kulanka una Mahadceliyay beesha caalamka isagoo hoosta ka xariiqay in mudda yar ay harsan tahay lana dardargeliyo doorashooyinka iyo beesha caalamka ilaaliyaan balan-qaadyada.
Ergeyga gaar ah ee qaramada midoobey waxaa uu kuu dhiirigeliyay dhameystirka maamul goboleedka Hiiraan iyo Shabeellada dhexe, geedi u socodka dib u eegista dastuurka iyo arrimaha doorashda 2016-ka.
Madasha waxaa ay guddiyada doorasho ee heer federal iyo gobol ku bogaadisay horumarka laga gaaray diyaargarowga loogu jiro geedi u socodka doorashada 2016-ka oo ay ka mid yihiin kullamada u bilowday Odoyaal dhaqameedka oo looga arrinsanayo diyaarinta ergooyinka doorashada dadban ee 2016-ka.
Daah-furnaan Doorashada: Madasha waxaa ay ku celisay in doorashada noqon doonto mid hufan oo lagu kalsoonaan karo lana badali doonin mabaa’dida asaasiga ah ee doorashada.
Madasha Waxay carrabka ku adkeeyeen muhiimadda wacyigelinta dadweynaha.
Xubis kasta oo madasha ka mid ah waxaa uu saxiixay warqadda xeerka anshaxa ee hufnaanta howlaha doorashooyinka dadban.
Madasha waxaa ay ku boorineysaa dadka u tartamaya Xildhibaannimada iyo xilka madaxweynaha in ay saxiixaan warqaddan hufnaanta doorashada.
Guddiga doorashada waxaa la doonayaa in ay xaqiijiyaan in Muarashax kasta ka hubiyaan in codsigiisa ku lifaaqan yahay xeerka anshaha.
Madasha waxaa ay ku celisay in hey’ado Soomaaliyeed iyo kuwoo caalami ah ay Goobjoog ka ahaadaan doorashada.
Guddiga doorashada dadban ee heer federal waxaa in uu dhameystiraa hab-raacyada iyo sharciyada doorashada, marti-qaadna loo fidiyo xubnaha hey’adaha Soomaalida iyo kuwa caalamiga ah.
Miisaaniyadda doorashada: Madaxda waxaa ay wal-wal ka muujiyeen miisaaniyadda lagu fulinayo doorashada, waxaa kaloo ay sheegeen in miisaaniyadda qaranka 2016-ka aaney ku jirin qoondo ku saabsan doorashada 2016-ka.
Madasha waxaa ay go’aansatay in doorashooyinka lagu fuliyo waqtigii loo qorsheeyay, waxaa ay ballan-qaadeen in doorashooyinka ay ku dhici doodaan sida ay qorsheeyeen guddiga doorashooyinka dadban.
Madasha waxaa ay soo jeediyeen in Miisaanyidada doorashada 2016-ka ay isku tashadaan dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada, iyadoo aan meesha laga saareyn beesha caalamka.
Madasha waxaa ay soo dhaweysay dib u eegista dowladda ku sameysay miisaaniyadda 2016-ka, kuna dareyso qarash lagu maamulayo am laga bixiyo doorashada dadban ee 2016-ka.
Ra’isul wasaaraha waxaa loo wakiishay in beesha caalamka ku adkeeyo in ay fuliyaan lacagihii ay ballan-qaadeen.
135-ta Oday waa Odoyaasha saldhigga ah u ah liiska Odoyaal dhaqameedka Soomaaliyeed, Liiska asalka ah waxaa lagu daray duubkii lagu badalo duub geeriyooday.
Odoyaal dhaqameedka beeshiisa ay kala degto labo deegaan waa uu wakiil ka yahay halka uu deggan yahay halka uu wakiil u dooranayo meelaha kale.
Madasha waxaa ay sheegtay in Ugaas Xasan Ugaas Khalif uu yahay duubka beesha Xawaadle ugu jira liiska 135-ta.
Oday dhaqameedkii tagi-waayo goobta doorashada dadban ka dhacesyo ama ergay u dirsan waaya, waxaa arrinkaas la wareegaya guddida doorashada dadban iyo maamul goboleedka uu kursiga yaallo, si beesha u soo xulato 5 nabadoon oo midkood madax yahay.
Beelaha kuraasta leh balse aan oday dhaqameed ugu jirin 135-ta, waxaa saxiixaya isla odaygii u saxiixay 2012-kii isagoo wada tashi la sameynaya cidda ama beesha kursiga iska leh.
Kuraasta beelaha Ruts-ka ee goloyasha baarlamaanka waxaa uu saxiixaya odayga reer Rutska ugu jira 135, lana tashanaya odaoyasha kale.
Labada kursi ee beesha Mushuguli waxaa ka tashanaya jubblanad iyo Koogur Galbeed.
Beelaha golaha shacabka ku leh 3 kursi waa in midkoood ahaato Haween.
Beelihii diida soo bandhigga kursiga haweenka, kursigaas waa la laalayaa.
Aqalka sare, waa in dowlad goboleed kasta xqiijiso 30% in haweenka noqdaan.
Madsha waxaa ansixisay waajibaadka iyo shaqada guddiga khilaafaadka, waxaana la dhisay, lana ansixiyay xubnaha guddiga oo ka kooban 25 xubnood.
Beesha caalamka waxaa loogu baaqay in ay ku darto khubaro la taliya guddigan.
Guddiga oo kaashanaya khubarada waxaa loogu baaqay in uu sameyso xeer nidaamiye dacwo qaadiska lagu soo afjarayo cabashooyinka.
Guddiga waa in uu kulmaa todobaad gudahiisa oo ka bilaabeysa taariikhda magacyadooda la soo bandhigay.
Xuseen Macallin “NISA Sharci Ma Ahan” (Muuqaal)
Waa Kuma Madaxweynaha Cusub Ee Puntland Saciid Cabdullahi Maxamed(Dani)
Gaari Ay La Socdeen Ciidanka DFS Oo Qof Bajaajle Ah Ku Diley Muqdisho
Kaydka Goobjoog Select Month February 2020 (179) January 2020 (171) December 2019 (174) November 2019 (153) October 2019 (168) September 2019 (169) August 2019 (238) July 2019 (230) June 2019 (233) May 2019 (236) April 2019 (172) March 2019 (195) February 2019 (173) January 2019 (249) December 2018 (261) November 2018 (235) October 2018 (297) September 2018 (366) August 2018 (329) July 2018 (310) June 2018 (295) May 2018 (348) April 2018 (366) March 2018 (358) February 2018 (421) January 2018 (616) December 2017 (337) November 2017 (356) October 2017 (360) September 2017 (323) August 2017 (399) July 2017 (309) June 2017 (360) May 2017 (411) April 2017 (429) March 2017 (394) February 2017 (391) January 2017 (455) December 2016 (424) November 2016 (486) October 2016 (595) September 2016 (421) August 2016 (479) July 2016 (344) June 2016 (359) May 2016 (332) April 2016 (327) March 2016 (373) February 2016 (350) January 2016 (313) December 2015 (266) November 2015 (278) October 2015 (372) September 2015 (408) August 2015 (441) July 2015 (445) June 2015 (468) May 2015 (456) April 2015 (7) March 2015 (7) February 2015 (10) January 2015 (155) December 2014 (627) November 2014 (639) October 2014 (400) September 2014 (351) August 2014 (294) July 2014 (203) April 2014 (1) January 2014 (1) December 2013 (1) November 2013 (1) September 2013 (1) May 2013 (1) July 2012 (1) July 2011 (1) June 2011 (2) May 2011 (1) February 2011 (1) November 2010 (1) February 2010 (1)
closely bake [url=http://viacheapusa.com/#]viagra[/url] read...
sex free web cams [url=https://teitargioconpe.ga]sex cams 10...
therefore confidence generic viagra sales far gold generic v...
is there a generic cialis available? take cialis with or wit...
buy cialis no prescription when is the best time to take cia...